Ngabe uke wazama ukwelashwa kokukhanya kwe-LED?
Ngabe uke wazama ukwelashwa kokukhanya kwe-LED? Ukukhanya Okuphuzi? Ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka? Yikuphi okulungele wena futhi yikuphi okuzokutholela imiphumela emihle kakhulu? Ukwelashwa kokukhanya kwe-LED okuphuzi yisikhumba esifanelekile esingiphakamisayo esizoshiya isikhumba sakho sibukeka siphilile futhi sikhazimula. Kungcono kakhulu: Ukuphulukiswa kwesilonda -ukuvuselelwa kwesikhumba -Rosacea nokubomvu I-Therapy Light Light Therapy nayo iyindlela enhle yokwelapha ngemuva Kokujovwa Kwezimonyo, iMicr ...
Kuyini ukuqopha umzimba kwe-HI-EMT?
Kusetshenziswa ubuchwepheshe be-HI-EMT (High Energy Focused Electromagnetic Wave) ukukhulisa nokuqinisa imisipha ye-autologous ngokuqhubekayo nokwenza ukuqeqeshwa okwedlulele ukubumba kabusha ukwakheka kwangaphakathi kwemisipha, okungukuthi ukukhula kwemisipha yemisipha (ukukhuliswa kwemisipha) nokukhiqiza amaketanga amasha kanye nemicu yemisipha (musclehyperplasia), ukuze uqeqeshe futhi wandise ukuqina kwemisipha nevolumu. & nbs ...
Kufanele I-Salon Yobuhle Ikhethe Kanjani Idivayisi Yokukhipha Izinwele?
Ukususwa kwezinwele zemishini yobuhle, ukususwa kwezinwele ze-laser nokususwa kwezinwele okukhethiwe kuyasetshenziswa njengamanje. Ngakho-ke, ubuhle be-salon bakhetha kanjani imishini yokususa izinwele? Uyini umehluko phakathi kokususwa kwezinwele ne-laser nokususwa kwezinwele? Ake sibheke ukuthi uMenzi Womshini Wobuhle beLaser uhlola kanjani ukususwa kwezinwele ze-laser bese ukhetha ukususwa kwezinwele! Lapho ukhetha idivaysi yokususa izinwele, uma i-beauty salon ...
Kungani Ukhetha Umshini Wokususa Izinwele ze-Fiber Laser wokususa Izinwele?
Njengomuntu othanda ubuhle, iphrojekthi yokususa izinwele ivame ukufakwa endaweni yokuqala, ngoba kuphela ngesikhumba esibushelelezi nesiguquguqukayo njengesisekelo, uhlelo lokugcina nokunakekelwa lungasetshenziswa ngaphandle komsebenzi ongelusizo oluningi. Uma sikhuluma ngezindlela zokususa izinwele, ayikho kuphela imikhiqizo yokususa izinwele emakethe yobuhle, kepha bonke banezithiyo zabo ezingeke zingazi ...
Ukuqapha ngesikhathi se-Laser Beauty
Kungani abantu abaningi beyizuzile imiphumela ababeyicabanga ngaphambili ngemuva kokwenza amaphrojekthi wobuhle be-laser? Ingxenye enkulu yalokhu kungenxa yokunganakekelwa ekwelashweni kwangaphambi nangemva kwelaser. Okulandelayo, i-Laser Beauty Machine Manufacturer izothatha wonke umuntu ukuthi abone ukuthi yini okufanele uyinake! a. Buza ikhasimende ngaphambi kokuhlinzwa: ukuthi isikhumba siyazwela, asinazwani, noma ngabe sikhona ...
Ngabe ukususwa kwezinwele usebenzisa i-808nm Diode Laser Hair Removal Machine kunomthelela ongemuhle emzimbeni?
Njengomkhiqizi womshini we-Laser Beauty Machine, ngifuna ukukutshela ukuthi ukusetshenziswa kwemishini yobuhle be-laser akunabuhlungu futhi kuphephile. Ubuhle beLaser yindlela entsha yobuhle eye yavela eminyakeni yamuva. Uma kukhanyiswa ngenani elifanele lokukhanya kwelaser, isikhumba siba buthaka futhi sibushelelezi. Njengokwelashwa kwezinduna, isikhwehlela esimnyama, izindawo zeminyaka, ukususwa kwezinwele, ukususwa kwemibimbi ebusweni ....
Yiziphi izingqinamba okufanele ziqashelwe ngemuva kokuthi i-Laser Beauty Machine isuse induna?
Ukuba khona kwezimpawu zomqubuko kwenza ubuso bubukeke bungalingani, okuthinta kakhulu ubuhle bobuso bethu. Amamaki ezinduna kulula ukudala ukwehla. Imishini yobuhle be-Laser ukususa amamaki enduna yindlela yokwelashwa ekahle kakhulu futhi elula yale nkinga ngendlela. Ngakho-ke, yiziphi izinkinga okufanele uzinake ngemuva kokususa amamaki enduna? Okulandelayo, ake silalele ukwethulwa kweLaser Beauty Machi ...
Uyazi ukuthi kukhethwa ithuluzi lokususa izinwele le-Laser?
Ehlobo elishisayo, abantu bagqoke izingubo ezinhle nezipholile, kepha kubantu abanezinwele zomzimba ezinzima, bakhathazwa yihlazo lokususa izinwele zomzimba. Kunezindlela eziningi zendabuko zokususa izinwele, kepha umphumela wokususa izinwele awumuhle futhi kukhona ubuhlungu obuqinile. Ithuluzi lokususa izinwele le-laser elingu-808 lingafinyelela ukuqandisa unomphela endaweni yokuqandisa, oku ...
Yini indlela engcono kakhulu yokwehlisa isisindo somzimba?
Izindlela zokwehlisa isisindo ngokuvamile zifingqiwe njengokunciphisa umzimba, ukuvivinya umzimba ekudleni, ukunciphisa umzimba, kanye nokwehlisa isisindo somculo. Yiziphi izici zalezi zindlela zokwehlisa isisindo? 1. Ukuzivocavoca ukunciphisa umzimba kuyindlela enempilo yokunciphisa isisindo, kepha kudinga umuntu onesilinganiso esithile sokubekezela ukufeza umphumela. Umphumela wokwehla kwesisindo uhamba kancane futhi ...
Yini i-RF Beauty Technology?
Njenge-Laser Beauty Machine Factory, yabelana nawe. Ngokuthuthuka okusheshayo kobuchwepheshe besimanje bobuhle, kukhona ubuchwepheshe obuningi futhi obungaphepha futhi bukhuthaze ngempumelelo ukuvuselelwa kwesikhumba. Izindlela zendabuko zokuvuselelwa kwesikhumba okungasetshenziswanga zibandakanya ukukhishwa kwamakhemikhali, ukuhuzuka kwesikhumba, nokulungiswa kabusha kwe-laser (exfoliation), okungasusa indawo yesikhumba. Kodwa-ke, lawa ma-invasi ...
Yini iFreckle Beauty Equipment?
Amachashaza ngeke anciphise kuphela inani lobuso, kepha futhi angathinta nemizwa. Iyiphi indlela okufanele isetshenziswe ukususa ngokuphelele amabala noma izibazi ebusweni? Yiziphi izinsimbi ezingasusa amabala? Ake sabelane ngayo neLaser Beauty Machine Manufacturer. Yini i-picosecond? Umshini wokususa i-Picosecond Laser Tattoo wuhlobo lwe-Q-switched of laser. It is ikakhulukazi esetshenziselwa ukwelashwa abanye p ...
Ungawasusa kanjani amaTattoos Ngokuphepha?
Ukuwashwa kwamathambo ukususa izithombe, umbhalo, nezinhlamvu zesiNgisi ezazidwetshwe emzimbeni ekuqaleni. Mhlawumbe ngenxa yothando, impilo, kanye nenhloso yokushintsha isimo noma imo, inani labantu abageza ama-tattoo nalo liyanda. Eqinisweni, ukususa ama-tattoos akulula njengokucabanga. Lokhu kungenxa yokuthi ngenkathi kwenziwa inqubo yokudweba umzimba, i-pigment esetshenzisiwe ngokuvamile itholakala eDermi ...